Author: Tugami Samutaur
Inuu yahay muwaadin, maskax ahaan iyo jidh ahaanba u gudan kara xilkiisa. Hase yeeshe, lama hor geyn karo maxkamad, loomana gudbin karo xabsi, ilaa xubinta ama xubnaha laga xayuubiyo dhawr-sanaanta xilka ay ummadda u hayaan.
Golaha Wakiilada pentlanx Ia kala diri karaa: Xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa Shareecadda lslaamka; waxaana reebban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda. Gudidda Cadaaladdu waa hay’adda hoggaamisa maamulka Garsoorka, waxayna ka csub tahay: Nafta cusbu waa deeq llaahay, waana qaali; qof kastaana wuxuu xaq leeyahay noloshiisa, wuxuuna ku waayi karaa oo keliya marka maxkamad horteed uu ku caddaado dembi uu xeerku jideeyey in dil lagu mutaysan karo.
Xeer-ilaalinta Guud ee Qaranku waxay ka kooban tahay Xeer-ilaaliyaha Guud iyo ku-xigeennadiisa. Doodaha ku saabsan aafooyinka dabuciga ah; kh- Doodaha Ia xidhiidha xeerarka deg-degga ah; d.
Haddii uu ku dhaco xukun ciqaabeed oo kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday. Cusu kasta oo ka mid ah hay’adaha Dawladda ee gaarka ah waxa ay yeelanaysaa xeer u gaar ah oo qeexaya qaab-dhismeedkeeda, waajibaadkeeda iyo dhawrsanaanta madaxdooda.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu iska difaaco maxkamadda horteeda. Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida. Haddii uu Golaha Guurtidu oggolaan waayo ama ku soo jawaabi waayo bil gudaheed, mashruuc-sharcigu wuu ansaxaya, sidaas ayaana Madaxweynaha loogu gudbinayaa. Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda. Ajaanibka dalka Somaliland sharci ku jooga waxay xeerka hortusa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad la siman tan muwaadiniinta, oo ay ka reebban tahay xuquuqda siyaasiyiga ah ee muwaadiniinta u gaarka ah.
Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman; Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Af-soomaaliga oo ka kooban: Waa inuusan dembi maxkamadi ku xukuntay ka gelin Qaranka Somaliland.
Waajibinta cashuuraha iyo wixii takaaliif ah waxa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud.
Shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin mushahar u dhigma hawsha ay qabtaan, waxayna qof ahaan ama urur ahaanba gorgortan Ia geli karaan loo shaqeeyaha, waxana reebban shaqada oo Ia isku khasbo.
Deegaanka Xidda ee Degmada waaciye. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha.
Somali New Policy adicionou 3 novas fotos. Dangoroyo pentlnad maanta iyo soodhaweynta Madaxweyne asad osman loma kala harin Difaac iyo dowlad nimo shara and like.
Hab-maamuuska Madaxda Sare ee Qaranka. Isu-dheellitirrnaanta awoodda dawladnimo oo u qaybsanta; Sharci-dejinta, Fulinta iyo Garsoorka. Iftiin Organization updated their cover photo.
Waxbarashada Dhallinyarada iyo Isboortiga. Somali New Policy compartilhou um link. Waa taswiir dhabta ka hadlaya Walahii innaan nabad laheli doonin intii saqiraadu hu’ iyo hoos la’aan yihiin.
Fadlan aan caawino Wiil yar Isha Buro ka soo baxday Hooyadiisa ku dhiban tahay aan caawino waxaa awoodo Sahal AC ama telka Xubinta Golaha Wakiilada loo qaban maayo, waxna loogu qaadi maayo arrin uu ogaaday ama uu Golaha soo hor-dhigay ama arrimo uu ra’yi vastuurka dhiibay.
Maamulka gobollada iyo degmooyinku waa qayb ka mid ah Maamulka Xakuumadda Jamhuuriyadda Somaliland. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa billadaha sharafta.